Imbasa yeMall Marathon eQhelekileyo yokuSebenza kweMidlalo
Ubungakanani: malunga ne8cm
Nesingxobo umbala: nickel antique
Ngasemva: kuqhume isanti
Izikhonkwane ze-enamel ezinzima ngokwezifiso:
Ngamanye amaxesha kubizwa izikhonkwane ze-epola, izikhonkwane zokuxelisa i-cloisonné okanye izikhonkwane zokufa ezibethekileyo nge-enamel enzima, luhlobo lomsebenzi wobugcisa kwiibheji zepini. Izikhonkwane ze-enamel ezilukhuni zigudile ukuya kumhlaba wokuchukumisa kwaye zigcwaliswa ngombala kusetyenziswa imibala ye-PMS kwaye zibhakwe kude kuphile i-enamel. Iindawo eziphakanyisiweyo zentsimbi kunye nemibala zikwelinye inqanaba kwaye emva koko zenziwe ngesandla zapholiswa ngokugudileyo zaza zatyabeka ngegolide, isilivere okanye ubhedu.
Izikhonkwane ze-enamel ezinzima zinokubonakala okuhlala ixesha elide. Banexabiso eliphakamileyo kakhulu ngenxa yemibala yabo eqaqambileyo, ezizezona zikhethekileyo kwizikhonkwane zomnyhadala, izikhonkwane zendibano, izikhonkwane zobuzalwana, izikhonkwane zesorority, izikhonkwane zopolitiko kunye nezikhonkwane ezihlanganisiweyo.
Ngamava ethu okusebenza anempumelelo kunye nezisombululo ezinengqiqo, ngoku siye sajongwa njengomthengisi onokuthenjwa kuninzi lwabathengi bamazwe angaphandle abaza kuba ngabathengi be-OEM. 'yomthengi kuqala, qhubeka phambili', samkela abathengi ngokunyanisekileyo kwikhaya lakho nakwamanye amazwe ukuba basebenzisane nathi.
I-OEM eyenziwe ngokwezifiso i-China Challenge Coin Presentation Case kunye ne-Challenge Coin Plastic Sleeve price, Ngomgangatho olungileyo, ixabiso elifanelekileyo kunye nenkonzo enyanisekileyo, sinandipha igama elihle. Merchandise lithunyelwa kuMzantsi Melika, Australia, mpuma Asia njalo njalo. Sibamkela abathengi ngokufudumeleyo ekhaya nakumazwe aphesheya ukuze basebenzisane nathi ngekamva eliqaqambileyo.
Egqithileyo Intsingiselo yeMfundo yaBantwana abaDala
Okulandelayo: I-Cute Animal Hard Enamel yesiko yeeKhonkco zamaXabiso
National Flag Metal eqhina Pin Ibheji Setha Diamond ...